डिएमसी सेमिफाइनलमा – Khel Dainik
बुटवल (खेलदैनिक) । डिएमसी तुल्सीपुर रुपन्देहीमा जारी चौथो सञ्जिवनी कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । सोमबार भएको तेस्रो क्वाटरफाइनलमा डिएमसीले झरना स्पोर्टस क्लबलाई टाईब्रेकरमा ५–४ ले हराउँदै सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो ।
तिलोत्तमा–१४ बाघधुरा देवीनगर स्थित स्थानीय खेलमैदानमा भएको निर्धारित समयको प्रतिस्पर्धात्मक खेल दुवै टोलीले १–१ गोलको बराबरी खेलेका थिए । यद्यपि खेलमा अग्रता भने झरनाले लिएको थियो । खेल शुरु भएको ११औं मिनटमा शरद क्षेत्रीले बक्स भित्रबाट सटिक गोल गर्दै झरनालाई खेलमा अग्रता दिलाएका थिए ।
तर खेलको दोस्रो हाफको शुरुवाततिर डिएमसीले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो । झरनाका खेलाडीले बक्स भित्र बल क्लियर गर्ने क्रममा ह्याण्डबल गरेपछि डिएसमीले पेनाल्टीको अवसर पाएको हो । सो पेनाल्टीको अवसरलाई बिकास बुढा मगरले सहजै गोलमा परिणत गर्दै खेललाई रोमाञ्चक १–१ को बराबरीमा ल्याएका थिए ।
त्यसपछि खेलको छिनोफोनो टाईब्रेकरबाट लिनु परेको थियो । टाईब्रेकरमा भने झरना चुक्न पुग्यो । खेलको म्यान अफ द म्याच डिएमसीका गोलरक्षक सन्देश गुरुङ घोषित भए । प्रतियोगिता अन्तरगत माघ २७ गते मंगलबारको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेल लिस्नु युवा क्लब र योङ स्टार एफसी बीच हुने खेल संयोजक खिम थापाले जानकारी दिए ।
सञ्जिवनी युवा क्लब, तिलोत्तमा–१४ बाघधुरा देवीनगरको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद १ लाख हात पार्नेछ भने उपविजेताले ५० हजार प्राप्त गर्नेछ । प्रतियोगिताको फाइनल खेल आउँदो फागुन १ गतेका दिन हुनेछ ।
← वार्ड नम्बर १० फाइनलमा, उपाधिका लागि ७ सँग भिड्ने खुला स्नुकरमा राजनलाई सफलता →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने माघ २६, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? माघ २६, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली माघ २६, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा माघ २६, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित माघ २६, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा माघ २६, २०७७